HORDHAC: Barcelona vs Manchester United……(Red Devils maka jawaabi doontaa jugta lugtii hore) – Gool FM
HORDHAC: Barcelona vs Manchester United……(Red Devils maka jawaabi doontaa jugta lugtii hore)
(Europe) 16 Abriil 2019. Manchester United ayaa caawa Nou Camp ku booqaneysa kooxda Barcelona lugta labaad ee wareega sideed dhammaadka Champions League iyadoo la ogsoon yahay in lugtii hore Old Trafford looga soo adkaaday 1-0.
Tababare Solskjaer ayaa xaqiijiyay inay kulanka taam u yihiin weeraryahankiisa Alexis Sanchez iyo laacibka qadka dhexe ee Matic kaddib markii ay ka soo kabteen dhaawacyo.
Sanchez oo 141 kulan u saftay Barcelona saddex sano uu la joogay ayaa lix bilood ku maqnaa dhaawac jilibka ah, Matic ayaa isna garoomada ka maqnaa saddexdii kulan ee ugu dambeeyay.
Matteo Darmian ayaa sidoo kale lagu soo daray 22-ka laacib ee loo soo xushay kulanka caawa kaddib dhaawac uu ka soo kabtay balse waxaa maqan Ander Herrera iyo Eric Bailly
Lionel Messi ayaa taam u ah inuu ciyaaro kulankan kaddib markii uu dhaawac wajiga ah gaarsiiyay Chris Smalling lugtii hore ee lagu soo ciyaaray Old Trafford, Kabtanka Barca ayaa la nasiyay kulankii ay horyaalka la ciyaareen Huesca sabtidii.
Kulanka: Barcelona vs Manchester United (Champions League)
Goobta: Nou Camp
Garsoorka: Felix Brych
Barcelona ayaan marna guul darro kala kulmin Man United marka ay mininkeeda kula ciyaareyso tartamada Yurub (2-guul iyo 2-barbaro) kulankoodii ugu dambeeyay ee ceynkan oo kale ah wuxuu ku idlaaday 0-0 bishii Abriil 2008.
70-kii jeer ee hore kooxaha guuleystay lugta hore ee wareegyada bug baxa Champions League kaliya afar ka mid ah ayaa tartanka laga reebay (6%). Yeelkeede, labo ka mid ah xaaladahaas xilli ciyaareedkan ayay dheceen oo ay ka mid tahay guushii Man United ay ka gaartay PSG.
Guul dararada lugtii hore, Manchester United ayaa ku fashilantay inay hal shot/Laad xitaa la beegsato goolka markii ugu horreysay kulan Champions League ah tan iyo bishii Maarso 2005 markaa ay guul darro 1-0 kala kulmeen AC Milan
Barcelona ayaa wareega xiga u soo gudubtay 39-jeer 41-kulan oo tartamada Yurub ay soo adkaato lugta hore ay ku soo ciyaarto bannaanka marka laga reebo kulan ay ku wajahday FC Koln 1980-81 UEFA Cup iyo ciyaar ay la yeelatay Metz 1984-85 Cup Winners’ Cup.
Barca ayaa guul darro la’aan ah 30-kulan Champions League ay mininkeeda ku ciyaarto waana muddada ugu dheer tartankan (27-guul iyo 3-bar baro), waxaa intaa kuu dheer gool ka badan lagama dhalin 30-kaas kulan (15-gool guud ahaan) tan iyo guul daradii 0-3 ay kala kulmeen Bayern Munich wareegii afar dhamamadka 2012-13 .
Lionel Messi ayaa dhaliyay 22-gool 31-kulan uu Champions League ku wajahay kooxaha Ingiriiska waana laacibka ugu badan tartankan. 13-ka mid ah goolashan waxay yimaadeen 9-kii kulan ee ugu dambeeyay uu kooxaha England ku wajoho Nou Camp oo ay ka mid yihiin saddexleey uu ka dhaliyay Arsenal bishii Abriil 2010 iyo Manchester City bishii Oktoobar 2016.
Luis Suarez ayaa sameeyay laadadkii ugu badnaa ee aan gool lagu dhalin Champions League kal ciyaareedkan (33-Shot/Laad)
Manchester United ayaa wareega xiga u soo gudubtay mid ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeeyay tartamada Yurub ee lugta hore looga soo adkaado mininkeeda, taasina waa kulankii dhawaa ee PSG.
Boqolkiiba Sagaashan goolasha Man United ee Champions League kal ciyaareedkan waxay ku soo dhalisay meel ka baxsan garoonkeeda. Yeelkeede, waxay guuleysteen kaliya hal kulan shantii kulan ee ugu dambeeyay wareega bug baxa ay ku soo ciyaarto meel ka baxsan garoonkeeda.
Man United ayaa guul darreysatay 49-kulan oo Champions League ah, haddii caawa laga adkaado waxay noqon kartaa kooxdii sagaalaad ee 50-jeer laga adkaado tartanka ama kooxda labaad marka la eego dhanka kooxaha England oo waxaa ka horreysa Arsenal oo 53-guul darro dhabarka loo saariyay.
Safafka Macquulka ah ay caawa ku soo gali karaan Barcelon iyo Manchester United:
Shaxda rasmiga ah kulanka horyaalka La Liga ee kooxaha Leganes Vs Real Madrid